Antonio Conte oo xiiseynaya shaqada Kooxda Manchester United | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Antonio Conte oo xiiseynaya shaqada Kooxda Manchester United
Tababarihii hore ee Chelsea Antonio Conte ayaa lagu soo waramayaa inuu xiiseynayo inuu noqdo tababaraha cusub ee Manchester United , iyadoo la isla dhexmarayo mustaqbalka Ole Gunnar Solskjaer .
Solskjaer ayaan la rumaysan yahay in uu cadaadis dhab ah ku jiro wakhtigan iyada oo Red Devils ay hal dhibic ka heshay saddexdii kulan ee ugu dambeeyay ee Premier League.
Si kastaba ha ahaatee, mustaqbalka fog ee Macalinka reer Norway ma cadda, Conte ayaana weli lala xiriirinayaa booska Old Trafford, iyadoo tababaraha Talyaaniga uu doonayo inuu ku laabto shaqada tababarka kaddib markii uu ka tagay Inter Milan xagaagii.
Sida laga soo xigtay saxafiga Duncan Castles, 52 jirkaan ayaa xiiseynaya inuu bedelo Solskjaer maadaama uu aaminsan yahay inuu ku guuleysan karo Champions League kooxda.
“Waxaan u malaynayaa inay jiraan laba musharrax oo cad marka loo eego tababarayaasha ku guuleystay heerka ugu sarreeya ciyaarta, kuwaas oo shaqo la’aan ah oo heli kara Manchester United l Mid waa Zinedine Zidane midna Antonio Conte, mowqifka Conte, waa la ii sheegay, waa inuu xiiseynayo shaqada Manchester United.
Conte ayaa Inter kula guulaystay horyaalka Seria A xilli ciyaareedkii hore laakiin waxa uu kooxda ka tagay xagaagii hore kadib markii ay isku khilaafeen maamulka kooxda ee ku saabsan qorshahooda dhaqaale.
Previous articleGalmudug oo shaacisay inay la wareegtay Guriceel laguna raad-joogo Sheekh Shaakir
Next articleDEG DEG: Erdogan oo amray in Turkey laga eryo safiirada 10 dal oo Reer Galbeed ah
Cristiano Ronaldo oo laga yaabo inuu tago haddii Man United ay...
Wararkii ugu dambeeyey ee natiijada doorashada Puntland – Yaa ku horreeya?